HGH abaghị uru na Thailand | Jiri hormone na-eto eto na-abawanye na
HGH abaghị uru na Thailand | Jiri uru hormone na-eto eto maka ụba abụba na Bangkok
Mmiri hormone (somatotropin, HGH) Ọtụtụ ndị mmadụ Thailand ejikọtara ya na usoro nke ndị na-eme egwuregwu ahụ. Otú o si bụrụ - HGH nwere mmetụta siri ike nke anabolic, na-akwado ọganihu nke uru ahụ, na-ewusi usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ na ọbụna na-akpata mmetụta nke nchịkọtaghachi zuru ezu. Maka ohere ndị a site na ikike iji belata abụba anụ na-emekarị ka ọ ghara ịhụ, ma na efu - hormone nke na-eto eto na-eme ka ọ dịkwuo mma.
Maka ihe atụ, ị nwere ike ịchọta ọmụmụ banyere Mahadum Bangkok na 1998, nke 24 ndị okenye nwetara ọgwụ kwa ụbọchị nke 2 mg - 5 mg HGH maka ọnwa isii. N'oge a, anụ ahụ ha adịghị ebelata, ma nrịta dị n'etiti anụ ahụ na anụ ahụ dị na ya agbanweela n'ụzọ dị ịrịba ama - na nkezi, onye ọ bụla so na ya nwere 5.5 pound nke isi ahụ, ma, nke kachasị mkpa, ọ bụ abụba 5.7 furu efu. Ma ihe kachasị abụba abụba n'ime afọ. Ka a sịkwa ihe mere oge ikpeazụ ọ bụ ọgwụ ọjọọ dị ka Genotropin, jintropin na afoomone na ọgwụ ndị ọzọ na-eto eto ọgwụ nke nhọrọ maka ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu na-achọ iji belata pasent nke anụ ahụ.
Kedu ka hormone nke na-eto eto na-efu?
Akụkụ dị ukwuu nke ihe ọkụkụ na-ere ọkụ nke HGH jikọtara ya na mmetụta ya na metabolism. Metabolism, A maara nke ọma na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ sel ọ bụla n'ime ahụ mmadụ nwere ike ịnweta ma ọ bụ abụba ma ọ bụ glucose. Ma ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ glucose dị n'ime ọbara na-achịkwa insulin hormone anabolic, ọnụ ọgụgụ nke fatty acids na hormone growth. Ihe mgbaru ọsọ ịchọrọ iji nweta ụba dị arọ ma belata abụba, bụ ịmanye mkpụrụ ndụ iji rie abụba karịa glucose. Insulin abụghị azịza - ọ na - ejide glucose na ọkwa nkịtị ma na - echekwa ya n'ọgba. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ na-akpata mkpụrụ ndụ iji rie glucose, ọ bụghị abụba, n'otu oge na-amụba ka e guzobere abụba abụba n'ime imeju.
Ma HGH na-abụ ụdị onye na-agba ume nke insulin, na-agbalị iji belata mkpụrụ ndụ glucose na-amanye ya ka ọ rie abụba bara uru. Iji mee nke a, ọ na-etinye onwe ya na akpụkpọ ahụ nke abụba abụba ma na-eje ozi dị ka usoro njem nke na-ewepụ ha site na abụba abụba, na-eme ka ha baa n'ọbara, na-enye ha oxygen. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ na-agbanwe usoro nke lipolysis, ntụgharị iwelata ọnụ ọgụgụ nke abụba abụba. Ma nke kachasị mkpa, ọ dịghị HGH abụba abụba naanị agaghị ahapụ ọdịnaya ya ma ghara ibibi ya. Ma ọ bụrụ na mkpụrụ ndụ nke ahụ ga-achọ ihe ruru abụba bara uru karị, na nkwụsị nke mkpụrụ ndụ abụba n'okpuru ọrụ nke mmụba nke homone, na nchịkọta nke abụba sitere na nkwụnye ego ga-aba ụba, nke ga-ebute ọnwụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ichikota, ahụ dị na-amalite iri anụ ya. Na maka nke a, nke mbụ, ị ga-achọ oke homone na-eto eto.
Ụdị hormone nke na-eto eto maka ọnwụ ọnwụ na Bangkok
E nwere ọtụtụ usoro nke hormone. Onye ọ bụla n'ime ha na-ele anya na ebumnuche dị iche iche ọ kachasị mma tupu ịme ka onye ọ bụla n'ime ha gaa hụ dọkịta na Thailand. Ma ọ bụ, ma ọ dịkarịa ala, iji jide n'aka na ọ gaghị adị arọ, enweghi nsogbu na hormones thyroid na hormones na-emekọ ihe, ma ọ bụghị ihe atụ anya nke HGH dị anaghị egosiputa.
Ụdị kachasị nke HGH maka ụkọ ọnwụ ma nweta ahụike nke ahụ ike na-amalite site na injections subcutaneous nke usoro 2 nke ọgwụ ahụ kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na ha anaghị egosipụta mmetụta ndị dị n'akụkụ (n'okpuru), mgbe izu nke abụọ ị ga - eme ka ụbụrụ nke 5 dịkwuo elu, ma ọ gaghị adịkwa ogologo oge na - abanye n'ahụ nke nnukwu doses nke hormone nke na - eto eto ga - eduga na eziokwu ahụ bụ na pancreas na - agbali imeju ego dum nke insulin na-efu.
Rịba ama: Mgbe ụfọdụ, a na-atụ aro ka ị nyere aka na pancreas na nke a site na itinye insulin inulin. Ma, ọ dị mkpa maka atụmatụ maka iji hormone nke na-eto eto na-eme ihe dị elu, karịa ihe 5 kwa ụbọchị.
Ka ịdịpụta hormone nke na-eto eto mgbe ọ na-ahụ ya, ọ na-emepụta ọnọdụ kachasị mma, ntụgharị na belata ọbara shuga. Oge tupu oge nri (oge dị mma na afo efu na ụtụtụ) na n'oge ma ọ bụ mgbe ọ gasịrị mmega ahụ ọkụ, mgbe shuga na-ekpo ọkụ na mmega ahụ. Ngwunye ogwu a na-atụ aro ya, ọ bụ ezie na e nwere ihe ndị dị mma gbasara iwebata HGH intramuscularly. Na-agbanyekarị n'ime afọ, nke na-enye aka na-ezo aka abụba abụba n'ógbè a.
Usoro dum nke HGH ekwesịghị igafe ọnwa 6. N'oge a, dị ka ndị ọkachamara si kwuo, ịdị arọ na-efu 2 pound nke abụba ma nweta 2 pound nke ahụ ike kwa ọnwa, na-enweghị anwụ na mmega ahụ. Mana nke kachasị mkpa, mmetụta nke omume ọ bụla maka iji kpochapụbigabiga ókè ókè, ga-enwewanye mmelite. Ya mere, ọkpụkpụ zuru oke na-ebute hormone na-eto eto dị nnọọ mma karịa ndị ọkà mmụta sayensị.
Na oge nke usoro iji me ka mmetụta nke HGH dị mkpa ka ị banye n'ime usoro ọzụzụ nke egwuregwu, nke bụ ike, 2-3 ugboro n'izu. A ghaghị ime ka ike ịzụlite oge iji nweta ọzụzụ. Iji mee ka hormone nke na-eto eto gbanwee ahụ ahụ n'ime abụba, ị nwere ike tinye nri nri carbohydrate nke dị nro. N'ozuzu, ọ bụ ezie na e nwere nkwenye iji dowe ihe oriri nke calorie (ya bụ iri nri ma rie ihe dị ka calorie), ọbụna ikikere nke ikuku na calorie ka ukwuu nwere ike iwetara mmetụta ọkụ na-ere ọkụ.
N'oge a na-atụ aro maka ọnwụ kachasị mma ka ịṅụ ihe ọṅụṅụ na ọnwụ ndị ọzọ - oke hormone fọrọ nke nta ka ọ ghara imegide onye ọ bụla n'ime ha. Karịsịa nke ọma hormones thyroid, dịka thyroxine (100-150 μg kwa ụbọchị) ma ọ bụ triiodothyronine (25 μg kwa ụbọchị). Ọ bụghị nanị na ha bụ abụba ọkụ site n'onwe ha, kamakwa uru bara uru na thyroid gland. Ma n'oge uto uto, ọ chọrọ ya - HGH na - egbochi ọrụ ya, ọ pụkwara ịba ụba ya, nke mere na hormones nke thyroid n'oge a ga - enyere aka belata ngosipụta nke mmetụta ndị nwere ike ime.
ECA na clenbuterol na-adabere na mbempe nke na-eto eto na-emekwa ka mmetụ dị ọkụ gị dị elu, ọ bụ ezie na, ọ dị, ọ na-eme ka enwe mmetụta nke mmetụta ha.
Mmetụta nke HGH
N'ezie, HGH bụ ihe okike maka ahụ mmadụ. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ọ dị afọ, ọnụ ọgụgụ "onwe" ya na ụmụ mmadụ na-ebelata, nke mere na iweghachite inweta HGH site n'èzí yiri ihe na-adịghị emerụ emerụ, ọ ga-adakwasị ya karị ma ọ bụrụ na a naghị egbochi ya na hormone na ahụ. Nke a bụ mmetụta dị nta nke HGH. A na-ejikarị ya tụnyere steroid (mmetụta yiri ya, na -emekwa maka otu ìgwè dị iche iche), ma ọ dịghị emetụta mmepụta nke homonụ nwoke, ma n'ihi usoro dị iche iche nke arụmọrụ nwere obere ihe na-adịghị mma. Ọzọkwa mgbe a naghị achọta ọgwụ mgbochi na-eto eto maka usoro ọgwụgwọ, ọ na-ekwukwa banyere nchekwa ya.
Na Thailand, e nwere akụkọ ifo na iji hormone nke na-eto eto na-ebute ụba ntị, imi, cheeks, ire, cartilage, ọkpụkpụ (nke ọdịdị nke njakịrị rụrụ arụ na ebe nkwonkwo nkwonkwo), obi na akụkụ ndị ọzọ (n'ime ihe atụ e nyere "ime bodybuilders" bụ ndị na-eme egwuregwu na-etolite ozu ma ugbu a na-agbapụta afọ). Ihe a nile nwere ike ime, kama ọ bụ nanị mgbe ị na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe n'ụzọ dị ukwuu nke ọgwụ ndị a tụrụ aro. Umu ozo HGH na-eme ka o buru ibu dika nke a.
Ọ bụ mmetụta kachasị njọ nke HGH - ọrịa ọgbụgba ụdọ carpal, nke njirimara nke ụkwụ na-apụta. Ma ọ na-ejikọta na mkpakọ nke akwara na mpụta na-amụba ụzụ, ya mere ọnụego nke ihe nha na-enweghi ihe ize ndụ nke ọrịa.
Mmetụta ọjọọ na pancreas na thyroid gland, dị ka e kwuru n'elu. Ntuziaka - insulin na hormones thyroid, n'otu n'otu. Mgbe nkwusiri nke uto hormone na-agbake, glands naghachi.
Mmetụta dị obere bụ mmụba nke nrụgide, nke nwere ike igbochi ma ọ bụ belata usoro HGH, ma ọ bụ ọgwụ ndị na-ebelata ọbara mgbali.
Ebee ka ịzụta hormone growth na Thailand?
Ịzụlite hormone na-eto eto bụ eleghị anya ọ bụ ihe kachasị mkpa ọ ga-eme. Nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ndị na-anwụ anwụ na-azụ HGH site n'aka ndị ahịa "site n'aka" ma ọ bụ site na weebụsaịtị. Mana 75% nke ọgwụ na Thailand a gbajiri agbaji. Ọbụna ezigbo ndị enyi dị ndụ zụrụ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ n'ihi n'eziokwu na ndị ahụ echereghị ya - HGH kwesịrị ịnọgide na friji, ọ na-eme ka ndụ ya dịkwuo elu.
Otu nkwubi okwu bụ ịzụta hormone na-eto eto naanị na ahịa ọgwụ. Ọ bụ ọgwụ a machibidoro, mana maka egwuregwu (doping). Ịzụta hormone nke na-eto eto maka ọnwụm arọ ị nwere ike ịchọta n'ụzọ iwu na Bangkok. Mkpụrụ ọgwụ HGH egosiri bụ "Genotropin","Ansomone"na" Jintropin "Niile Na" ndị dị elu anọ "," Top-acha anụnụ anụnụ "na" Norditropin "bụ 100% adịgboroja. Ọbụna mgbe ịzụtara ọgwụ ọgwụ na-egosi na ị gaghị echefu ịlele ihe nkwụnye nchekwa na nkwakọ ngwaahịa Nke ndị na-emepụta ihe na-ejikọta iji merie mmegbu.